कथा : श्री ३ गिद्ध – MySansar
– जगदीश घिमिरे –
एकदम मध्यान्ह्र पनि कैलेकाहीं गोधुलीजस्तै धमिलो देखिन्छ । चालीस डिग्री सेन्टीग्रेडभन्दा तातो त्यो जेठ हुनु पर्दछ र हुनु पर्दछ आँखाको विस्तारभरि छरिएको बलौटे भूमिको सतहबाट समय समयमा लुको झोक्काले धूलाको ज्वार चुल्याउँदै बगाउँदै गरेको । यौटा मरेको भैंसालाई बल्लतल्ल लढियामा लादेर घरतिर फर्किरहेको लढीवान, यस्तोमा, एकदम मध्यान्हमा पनि, सारा आकाश गोधूलीजस्तै धमिलो देख्न सक्दछ ।
“हैन, एकदम मध्यान्ह छ … यो छारो उडेर सगर ढाकेको हो, घर पुग्दा झमक्क साँझ पर्लाजस्तो छ …” लडीवान सोच्दछ । के त उसले लढियामा लादेर ल्याएको मरेको भैसाको “शिकार” घरसम्म पु¥याउन सक्दैन ? सक्नै पर्ने हो – उ लढिया तानिरहेका भैंसातिर हेर्दछ ।
उसको हेराइलाई दाहिने भैंसाले गोब¥याइदिन्छ … खान पाए पो धेरै गोब¥याउने थियो उ जान्दछ । पुच्छरबाट उकालो लागेका उसका आँखा भैंसाका हिमालझैं चुलिएका हाडका चुलीहरुमा एकछिन रोकिन्छन् ।
उ भैँसा (राँगा)को चाक वरिपरिको हाड सुमसुम्याइदिन्छ । भैंसा पूच्छर एक कात लगाइदिन्छ र चाल घटाउँछ । उ रिसाउँछ र भैंसालाई एक कोर्रा हिर्काउँछ । जोडसँग हाँक्ने प्रयत्न गर्छ । जंगल निख्रिएपछि चौडी आएको थियो र चौडीपछि ओरालो । छोटो ओरालो पानीहीन खोलामा पु¥याउँथ्यो । खोलामा उसको दाहिने पांग्रा भासिन्छ । भैंसाले घुँडा टेक्छ । दाहिने भैंसा निर्वलियो थियो, यसले सोचेजस्तै भयो, आखिर तात्र सकेन ।
उसले मरेको भैंसालाई हार गुहार गरेर बल्लतल्ल लढियामा लादेपछि त्यसको जोडीको पदमा त्यै लडिया पछाडि बाधेर ल्याएको भैंसा नियुक्त गरेको थियो । दाहिने भैंसा उसैगरी मरेका भैंसाको जोडी झैं लढियाको पुच्छरमा बाँधियो । लढीवान आफ्नू ठाउँमा उक्लेर हाँक्न बल गर्न लाग्यो । तर सकेन । जगेडा भैंसालो पनि तात्र सकेन । त्यो पनि बस्यो । त्यो त झन् सबभन्दा दुव्लो हो, मर्नेभन्दा पनि, दुव्लो भएर नै जगेडामा परेको, के तात्र सकोस् ?
उसले फर्केर मरेको भैंसातिर हे¥यो ।
“बजार” जाँदा चारैवटा भैंसाले लढिया तानेका थिए । पु¥याएका थिए । लढियाभरि तोरी लादेर उसले सीमानाको छेउको मिलसम्म पु¥याउने ठेक्का लिएको थियो । महाजनसँग ज्याला उसले पेश्की लिइसकेको थियो । पेश्की त सधायो, यौटा भैंसा गुमाउनु परेकोले साह्रै घाटा भयो । तर अब के गर्ने ? खडेरीले भैंसा झाँटिएका थिए । अनिकालले उ पनि त दुव्लाएको छ … मरेको भैंसा घरसम्म पु¥याउनसके यो खडेरी सार्थक हुने थियो । भैंसाको मृत्यु सार्थक हुने थियो । … तर सकि एलाजस्तो छैन … सक्नू त अवश्य पर्ने, उ एक्लो छैन, जहानको लागि पनि सक्नै पर्छ ….
उ भैंसालाई सकेसम्म पिट्छ । भैंसा उठ्दैन । ओर्लिन्छ । दुबै बुढी औला भैंसाको नाक्को प्वालमा घुसारेर उ प्रतीक्षा गर्दछ, सास रोकिन्छ, पछि अवश्य त्यो उठ्नेछ । भैंसा उठ्छ । नाद समाएर उ फेरि हाँक्ने प्रयास गर्छ, ह … टक् … टके … टक् ।
लढीवानको नाकबन्दी (नाकाबन्दी ?) काम लागेन, भैंसा फेरि बस्यो । अब लढीवान राम्रै रिसायो, उसले सारा बिर्सियो । हिंड्दाहिंड्दै यसैगरी अचानक नमानेर, बसेर, अघि भर्खर मरेको भैंसाको घाटा, अझ अर्को म¥यो भने हुने घाटा, उसले सबै बिर्सियो । यौटा मामुली गाडावानको रीसको कति अर्थ हुन्छ उसलाई थाहा थिएन । सार्थक गर्ने प्रयासमा कम्मर कस्यो । भैंसाको पुच्छर मर्किउन्जेल बटार्नू, जीउमा उफ्रनु, सक्दो कोर्रा हिर्काउनु इत्यादि । तर भैंसाले टेरेन । वा अडाहा जनताजस्तै उसले सब सहन जान्यो ।
प्रयास तर सार्थक भएन । भैंसा मेरन । लढीवान थाक्यो । भैंसा कुटाइखान थाकेन । राम्रै थाकेरमात्र उसले आफ्नू रीसको अर्थ थाहा पायो अघि लढिया उलार पारेर मरेको भैंसालाई खसालिदिनु अनि बाटा लाग्नु उसले बुद्धिमानी जान्यो । उसले चाहेको थियो त्यो भैंसालाई घर लगेर तह लगाउन – छाला तरेर सुकुटी बनाउन । तर केही सीप लागेन ।
अब उसले बाँकी बाचेका भैंसालाई उ फेरि माया गर्न थालिसकेको थियो … आघुँ यस्तो खडेरी पर्ने छैन, उसले स्याहारमा कुनै कमी गर्ने छैन, भैंसा फेरि तग्रिनेछन् … आघुँ यस्तो अनिकाल पनि पर्ने छैन, जहान केटाकेटीहरू पनि फेरिनेछन् … सबैझैं उ भविष्यप्रति आशालु भैदिन्छ … रित्तो गाडा हिंडाएर उ निश्चिन्त भयो । साँच्चै बेलैमा उ घर पुग्नेछ, पत्नी झन् हताश हुनेछे – के ल्याइदिएको छ उसले यस खेपमा ? मात्र यौटा भैंसा गयो … ।
चौरभरि उम्रेका गिद्धहरु, वरिपरिका नाङ्गा रूखहरुमा फलेका गिद्धहरू र मान्छेले धरतीमा फिंजाएको कानूनी पखेटाझैं पखेटा फिजाएर आफैतिर ओर्लिरहेका गिद्धहरू देख्दा कोही पनि आफूलाई सीनु भन्ठात्र सक्छ । झुक्किन सक्छ । तिरमिराउँदो तातो आकाशमून्तिर आँखाको कसिंगर यौटा झ्याम्म रूखमुनि सिंयाल तापेर निदाएको शतप्रतिशत जीवित “तटस्थ” व्यक्ति हुनु पर्दछ त्यो – त्यही बटुवा मास्टर जस्तो ।
लुको तातो हावाको संगीतमा लोलाएका बटुवा मास्टरका आँखा र लठ्ठिएको उसको देहले हत्तपत्त चंगा हून, ब्यूँझिन, बाँचेका, हून मानेन । यदि गिद्धले ठूंग्नै लागे भने ? सबभन्दा पैले आँखै झिक्छ रे, अनि अन्धोले हात्ती छामेको कस्तो हुन्छ ? उ अन्धो हुन चाहँदैन, बरु सीनु हुन स्वीकार छ ।
ए एक झड्कामा उठ्छ । खाकीको खैरो, पसिनाले भिजेकोमाथि धुलो जमेर झन् खैरो फुलप्यान्टको बगलीबाट बिंडी झिक्छ । सल्काउँछ । आँखा चारैतिर घुमाउँछ, सीनु उ हैन, अर्कै रहेछ । तल गैरामा डङ्रङ् लडेको यौटा हरिटाट भैंसा । मास्टर देख्छ यौटट मान्छे छाला तर्ने हतियार बोकेर त्यो भैसाको सिनु तिर हानिन्छ । र छिटै भैंसासँग कुश्ती खेल्न लाग्छ त्यो मान्छे । कुरा बुझ्छ । उ निदाएकैबेला कसैले त्यो मरेको भैँसा फालेर गएछ, अर्को मान्छे आएर सीनुको अपरेशन गर्न लागेको रहेछ । त्यो मान्छे सिनु चिर्छ र छाला तर्न थाल्छ । तर निक्कै बेर लाग्छ त्यसलाई छाला तरी सक्न । उसले यसपाली राम्ररी तर्न सकेन । राम्रो भएन । राम्रो पैसा पाइँदैन । भोकले अत्याएकोले राम्ररी तर्न नसकेको हो, उ जान्छ । आइन्दा यस्तो हुने छैन ।
उसको मुटुको गति स्वाभाविकतातिर लम्कन्छ । आत्तिएको आपूmप्रति हाँस्छ, आफ्नू मास्टरीको पेशालाई धिक्कार्छ, अब उसले हिंड्नूपर्छ … ।
तर मास्टर रोकिन्छ, उसलाई हेर्न मन लाग्छ । त्यो मान्छेले सीनुसँग लाप्पा खेलेको हेर्न मन लाग्छ । सीनुसँग होइन, त्यसले जीवनसँग लाप्पा खेलेको थियो । एकदम तटस्थ भएर मास्टर सोच्दछ, वसन्त आएछ, मान्छेको होइन – गिद्धको, खडेरी र अनिकालको । गिद्धको होइन त्यस मान्छेको । त्यस मान्छेको शरीरमा केवल लगौंटी छ । भैंसाको छाला तर्दैछ । मासुको सुकुटी बनाउनेछ । सुकुटी बनाउन नसक्ने, वा नपर्ने व्यक्तिले सीनु मिल्काएको होला । ऐले यसले तर लगाउँदैछ । किनभने उ गरीब हो । सबै पशुको मासु खाने मान्छे हो, त्यसैले यो मान्छेको मासू खाँदैन । साँच्चै त्यसैकारण …. ।
गालाको हाड साह्रै उठेकोले साह्रै भित्र पसेको देखिने उसको आँखा एकपटक चारैतिर नियाल्छन् । छोरी आइपुग्नु पर्ने, उ सोच्दछ । छोरी आउँदै हुन्छे । देख्छ । हतार गरेर उ भित्रयांस छुट्याउँछ । कलेजो, फोक्सो, मुटु, मिर्गौला । अवश्य उसका छोराछोरी भोकै मर्ने छैनन् । … अवश्य उ बनी गर्न बजार गएको ज्वाइँलाई अनिकाल सिद्धिएपछि ज्यूँदी छोरी बुझाइदिनेछ ।
छोरी पर उभिएकी थिई । उ छोरीसम्म भित्रयाँस पु¥याउन हिंड्छ । दिन्छ – “आमा, भाई, बैनीहरूलाई पनि बोलाउनु, मासु ओसार्नु पर्छ अब ।” छोरीलाई अह्राएर फर्कन्छ । दिमागमा ज्वाइँ सम्झिरहेको हुन्छ, यै छोरीको पति, पत्नीलाई ससुराको जिम्मा लगाएर बनी गर्न हिंडेको ज्वाइँ ।
छाला तरेको भैँसातिर फर्कँदा फर्कँदै ऊ टक्क उभिन्छ । छोरीसम्म पुग्न र फर्कन उसलाई दुई मिनेट मात्र लागेको थियो । गिध्दहरूको यति छिटो यस्तो अतिव्रmमण उसले सपनामा पनि चिताएको थिएन ।
उसले ज्वाइँ छोरी सारा बिर्सन्छ ।
अघिनैदेखि पर्खेर बसेका स्याल र कुकुरले एकैचोटि अतिव्रmमण गरेछन् त्यो छाला तरको सीनुमाथि । सीनुमाथि नै गिद्धले पिरामिड उभ्याएका छन् । लूछा–चूँडीमा पिरामिड ठडिन्छ, ढल्छ । मन्दिर, गिर्जा, गुम्वा, उभिन्छन् ढल्छन् फेरि पनि उभिन्छन् ।
त्यो मान्छे टक्क उभिएको छ । सोच्दछ, यस्तो हेल्चव्रmयाइँ उसले कैल्यै गरेका थिएन । स्याल र गिद्धलाई हेपेको थिएन ।
मास्टर नगिचै जान्छ । त्यस पसिनाले अझ कालो टल्केको त्यस मान्छेको शरीरमा प्रस्ट मोटा नसा र मांशपेशी देख्दछ । आफ्नूचाहिं आइमाईको जस्तो डोलो, गीलो, हात पाखुरा देखेर लाज मान्छ ।
एकाएक कस्सिएको उसको मूटठी, पेशीमाथि फूलेका नशा देखेर मास्टर सोच्दछ, त्यस मान्छेले अवश्य पिरामिड ध्वस्त पार्नेछ ।
तर त्यसभन्दा पहिले नै कुकुर, स्याल र गिध्दहरूले त्यस छाला तरेको सिनुको मासु जति लगभग सबै समाप्त पारिसकेका हुन्छन् ।
मान्छे त्यस्तो आक्रमण चाल पाएर आकाशभरि बम बोकेको यानजस्तै गिद्धहरू उँभोतिर वेग हान्दै हुन्छन् ।
साँझ पर्न अझ केही समय बाँकी हुन्छ । मास्टरलाई घर पुग्न हतार हुन्छ । (‘बर्दी’ कथासंग्रहबाट साभार गरिएको यो रचना हामीले समकालीन साहित्यबाट लिएका हौँ। तपाईँ पनि आफ्ना रचना माइसंसारमार्फत् बाँड्न चाहनुहुन्छ भने पठाउनुस् story@mysansar.com मा )